Open Your Heart , Listen & Let’s Sail to Goal (July 3/2021) – PVTV Myanmar
2021-07-03 at 4:35 PM
2021-07-03 at 4:43 PM
ရက်စက်လိုက်တာ…အပြစ်ကျူးလွန်သူအပေါင်း ဝဋ်အမြန်ပြန်လည်ပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်…..
2021-07-03 at 4:54 PM
နံမည္ပဲထြက္လာျပီး လူမထြက္လာနိုင္တဲ့သူေတြအတြက္ အရမ္းစိတ္မေကာင္းပါဘူး တို့ေတြ ဒီတိုက္ပြဲကိုအဆံုးထိတိုက္က်မွာပါ
2021-07-03 at 4:59 PM
2021-07-03 at 5:12 PM
Listening this interview just gave me terrors. We can’t lose to them. 😔💔
2021-07-03 at 5:32 PM
2021-07-03 at 5:34 PM
ဟျောင့် စောင် ရူး အာလူးဖုတ်လို့ ပီးပီလား စောက်ရှက်ဝယ်ကပ်ရမဲ့ ကောင်တေ ကျပ်မပြည့်ဘူးဆိုတာ သိသာတယ်ခွေးသား
myat janton says:
2021-07-03 at 5:53 PM
စိတ်တွေမကောင်းလိုက်တာ၊ ဆုတောင်းပေးရုံသာမက အားလုံးဝိုင်းတော်လှန်ရမယ်၊ ငါ့တို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်၊🙏🙏🙏💪💪💪
2021-07-03 at 5:57 PM
Reject military coup.We must win.✊️👊
Liam bullet train popular says:
2021-07-03 at 7:34 PM
အရမ်းဂုဏ်ယူပါတ​​ယ် ရှင့် အရမ်းလည်း ခံစားရပါတ​ယ် အာဏာ ရှင်စနစ် အမြန်ဆုံးကြဆုံးပါစေ
2021-07-03 at 7:54 PM
ငယ္ ေလး says:
2021-07-03 at 8:00 PM
2021-07-03 at 8:41 PM
2021-07-03 at 9:34 PM
2021-07-03 at 9:45 PM
2021-07-03 at 10:01 PM
တိရိတ္ဆန် နာမည်နဲ့ကောင် ဝရမ်းပြေး…. လေရူး….
2021-07-04 at 11:17 AM
ဒီခေတ်ကြီးမှဒီလောက်မိုက်ရိုင်းတာ အသိဥဏ်နိမ့်ပါးပြီ အောက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ကလူတစုကိုဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်ပါနဲ့။
Mya Thiri Htun says:
False news TV Channel